အောင်ထွန်း၏ ငွေပျောက်သွားသည်။ အောင်ထွန်းလွယ်အိတ်ထဲတွင် ထည့်ထားခဲ့သော ငွေငါးထောင်မရှိတော့။ လွယ်အိတ်တစ်ခုလုံးကို အိတ်သွန်ဖာမှောက် ရှာဖွေကြည့်သော်လည်း မတွေ့။ စာအုပ်တွေကြားထဲ ၊ စာရွက်တွေ ကြားထဲ ရှာပြန်တော့လည်း မတွေ့။
အောင်ထွန်း ရင်တွေ ပူလာသည်။ အာခေါင်တွေက အလိုလို ခြောက်ကပ်လာသည်။ တံတွေးကို အကြိမ်ကြိမ် မျိုချနေသော်လည်း မပြေနိုင်ဘဲ ထပ်၍ ထပ်၍သာ မျိုချနေမိသည်။ ထိုငွေငါးထောင်ပျောက်၍ မဖြစ်ပါ။ အဖေ အောင်ထွန်းကို ရိုက်လိမ့်မည်။ ထို့ပြင် ဤငွေ မှာအောင်ထွန်းတို့ ငွေလည်းမဟုတ်။ လမ်းထိပ် ကုန်စုံဆိုင်မှ ဒေါ်ခင်နွဲ့ကို အကြွေးဆပ်ရမည့်ငွေများဖြစ်သည်။ အောင်ထွန်းက မေ့ပြီး ၀င်မပေးဖြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့နှင့် ညနေကျောင်းဆင်းမှ ၀င်ပေးမည်ဟု စိတ်ကူးကာ လွယ်အိတ်ထဲ ထည့်ထားခဲ့သည်။ ကျောင်းမတက်ခင် ဆော့နေပြီး စာသင်ခန်းထဲရောက်၍ ပြန်ရှာကြည့်သောအခါ ငွေငါးထောင်မရှိတော့။
အောင်ထွန်းစိတ်ထဲ ၀မ်းနည်းစိတ်က လှိုက်တက်လာသည်။ ပြီး တစ်စုံတစ်ရာကိုလည်း ကြောက်ရွံ့လာသည်။ သေချာသည်က ထိုတစ်စုံတစ်ရာသည် အဖေပင်ဖြစ်သည်။ အဖေ့လက်သံကို အောင်ထွန်းသိသည်။ အဖေမို့လို့ တစ်ခါရိုက်ပြီးလျှင် နှစ်ရက်၊ သုံးရက်နှင့် အရှိုးရာက မပျောက်။ ထို့အတွက်အောင်ထွန်း အဖေ့လက်သံကို ထပ်မံမမြည်းစမ်းချင်လို။
တွေးရင်းနှင့် မျက်ဝန်းထဲ မျက်ရည်များ ပြည့်လျှံလာသည်။ သို့သော်ငို၍မဖြစ်သေး။ ပိုက်ဆံရှာရဦးမည်။ ထိုအသိဖြင့် ကျလုဆဲဆဲ မျက်ရည်များကို အနိုင်နိုင် တားဆီးရင်း စားပွဲခုံတွေအောက်ရှာရသည်။ အောင်ထွန်း ယောက်ယက်ခတ်နေသည်ကို မြင်သော သူငယ်ချင်းများက အကျိုးအကြောင်းမေးကြသည်။ အကြောင်းစုံသိတော့ ကူပြီးရှာပေးကြသည်။ သူတို့မယူကြောင်းလည်း ပြောကြသည်။
အောင်ထွန်း ငွေငါးထောင်ပျောက်သည့်ကိစ္စသည် မျက်စိတစ်မှိတ်အတွင်းမှာပင် တစ်ခန်းလုံးသို့ပျံ့နှံ့သွားသည်။ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအားလုံး တအံ့တသြဖြစ်နေကြသည်။ မေးကြ၊ မြန်းကြ၊ စူးကြ၊ စမ်းကြသည်။ အချင်းချင်း လက်တို့ပြောကြသည်။ တစ်ယောက်တစ်ပေါက်ထင်မြင်ချက်တွေ ပေးကြသည်။ ကူရှာပေးသူက ရှာပေးကြသည်။ အောင်ထွန်းတို့ ကျောင်း၌ ငွေကြေးချမ်းသာသူများ သိပ်မရှိ။ သာမန်လက်လုပ်လက်စား၊ ၀န်ထမ်း သားသမီးများသာ ရှိသည်။ တစ်နေ့မှ မုန့်ဖိုး တစ်ရာ၊ နှစ်ရာလောက်ရကြသူများဖြစ်၍ ငွေငါးထောင်သည် သူတို့အတွက် များပြားသည့် ငွေပမာဏဖြစ်နေသည်။
အောင်ထွန်းကတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ယူသည်ဟု မစွပ်စွဲချင်ပါ။ စိတ်ထဲမှာတော့ ဟိုလူနိုးနိုး၊ ဒီလူနိုးနုိး သံသယ၀င်မိပါ၏.။ သို့ပေမယ့် သက်သေသက္ကာရ မခိုင်လုံဘဲ စွပ်စွဲရမှာကျတော့ မတရားရာကျမည်။ အောင်ထွန်းမလုပ်ချင်။ ပိုက်ဆံကလည်း တော်တော်ကြာသည်အထိ ရှာမတွေ့ပါ။ ကြာတော့ အောင်ထွန်း လည်း သမံတလင်းပေါ်ပစ်ထိုင်၍ ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုလိုက်မိတော့သည်။ ထိုစဉ်မှာပင် အောင်ထွန်း တို့အခန်းထဲသို့ ဆရာဝင်လာသည်။
“အားလုံးသတိ..... မင်္ဂလာပါဆရာကြီး၊ ကြိုဆိုပါတယ်ဆရာကြီး”
“မင်္ဂလာပါ.. ထိုင်ကြပါ၊ ဟ....ဘာဖြစ်နေကြတာလဲ။ အောင်ထွန်း မင်းဘာလို့ငိုနေတာလဲကွ”
ဆရာမေးပါမှ ဘယ်အချိန်က ကျလာမှန်းမသိလိုက်ရသည့် မျက်ရည်များကို သတိထားမိပြီး ဆက်၍ဆက်၍ ငိုမိတော့သည်။ ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုမိတော့သည်။ ဆရာ့အမေးကိုတော့ ဘေးမှ သူငယ်ချင်းက ၀င်ဖြေပေးသည်။
“ အောင်ထွန်းပိုက်ဆံပျောက်သွားလို့တဲ့ ဆရာကြီး”
“ဟေ...ငါးထောင် ...။ အောင်ထွန်း မင်းက ငွေငါးထောင်ကို ဘာလို့ယူလာရတာတုန်းကွ”
“ မဟုတ်ဘူးဆ၇ာကြီး၊ အဖေက ..ဟင့်.... ကုန်စုံဆိုင်က . အဒေါ်ကြီးကို ပေးခိုင်းလိုက်တာပါ....အင့်... .သားက မေ့ပြီး မပေးဖြစ်ခဲ့တာ..အာ...ဟာ..ဟာ...အီး.....ဟီး......”
အောင်ထွန်းက ငိုသံပါကြီးနှင့် ဖြေလေသည်။ ဆရာက တစ်ခုခု စဉ်းစားနေပုံရလေသည်။ အတန်းသားတွေအားလုံးကတော့ ဆရာကို ကြည့်သူကြည့်၊ အောင်ထွန်းကို ငေးသူငေးနှင့် ငြိမ်သက်နေလေသည်။
ဆရာဦးလင်းမောင် ခေါင်းရှုပ်နေသည်။ ယခုကိစ္စကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးရမှန်းမသိပေ။ ကလေးကလည်း ငိုနေပြီ။ ကျန်သည့်ကလေးများမှာလည်း အရိုးခံမျက်နှာလေးတွေနှင့်၊ မျက်ဝန်းအစုံတို့က ငွေငါးထောင်ကို သူတို့မယူကြောင်း ပြောပြနေသယောင်။
သို့သော်လည်း ဤအခန်းထဲမှ တစ်ယောက်ယောက်ကတော့ အောင်ထွန်း၏ ငွေကို ယူခဲ့ရမည်။ မဟုတ်လျှင် ပျောက်စရာမရှိ။ အခြားအခန်းမှ ကျောင်းသားများကလည်း အခန်းကူးပြီး ယူမှာမဟုတ်။ ဤအခန်းထဲတွင်ငွေခိုးသူတစ်ဦး ဧကန်ရှိနေပြီ။ ထို့အတွက်စစ်ရမည်။ ငွေငါးထောင်ကို ပြန်ရှာရမည်။ ဤကဲ့သို့ အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြားတာမျိုး ဆရာဦးလင်းမောင် မကြိုက်။ မရှိလို့ တောင်းစားလျှင် ခွင့်လွှတ်သည်။ သူတစ်ပါးပစ္စည်း ခိုးယူတာမျိုး ဦးလင်းမောင် လက်မခံနိုင်။ မွေးရာပါဗီဇကြောင့်ဖြစ်စေ၊ မိဘအရိပ်ထိုး၍ သားသမီးက အတုမြင်အတတ်သင်ကာ ဖြစ်စေ၊ ယခုလို ငယ်နုစဉ် ကလေးဘ၀မှာပင် ၄င်းအကျင့်အကြံမျိုးကို ဖျက်ဆီးချေမှုန်းပစ်ရမည်။
ငွေငါးထောင်ကို တွေ့ရေးအတွက် ဆရာဦးလင်းမောင်နှင့် အောင်ထွန်းတို့ မျက်စိလျင်လျင်ထားပြီး ရှာပါသည်။ သို့သော် ငွေငါးထောင်၏ အစအနကိုမျှ မတွေ့ရ။ တစ်ရာတန်အစုတ်ကလေးများ၊ ငါးဆယ်တန်အနွမ်းလေးများကိုသာတွေ့ရသည်။ နောက်ဆုံး လွယ်အိတ်တွေသာ ကုန်သွားသည်။ ငွေကိုမတွေ့ချေ။
“ ကဲ........... လွယ်အိတ်တွေထဲတော့ မတွေ့ဘူး။ မင်းတို့ကိုယ်တွေမှာ ရှာမယ်။ ယူထားရင် ခုထဲက လာပေးပါ။ ဆရာက ရှာလို့တွေ့ရင်တော့ မင်းတို့ မလွယ်ဘူး။ ကဲ...ဟုတ်ပြီ၊ ရှာပြီနော်”
ယောက်ျားလေးတွေကို တစ်ယောက်ချင်း အင်္ကျီအိတ်ကပ်တွေ၊ ဘောင်းဘီတွေထဲ ရှာသည်။
“ ဟာ..ဆရာ ဒီမှာ ”
အောင်ထွန်းအသံကြောင့်ဆရာဦးလင်းမောင် ကလေးတစ်ယောက်ကိုရှာနေရာမှ လှည့်ကြည့်လိုက်သည်။
“ ဟ.... ဟေ့ကောင်၊ အဲဒါ ငါ့ပိုက်ဆံကွ။ ကြည့်ပါလား။ ဒီမှာေ ထာင့် ခုနစ်ရာထဲရယ်”
“ ဆောရီးပါကွာ။ ငွေက အလိပ်လိုက်ဆိုတော့ ထောင်တန်တွေချည်းထင်လို့ပါ”
“ မင်း... သေသေချာချာကြည့်ပါလားကွ”
အချိန်တွေသာကုန်သွားသည်။ ငွေငါးထောင်က ဘယ်နားမှာမှန်းမသိပေ။ နောက်ဆုံးမိန်းကလေးတွေ ၏ လွယ်အိတ်တွေထဲ ရှာရန်သာရှိတော့သည်။
“ ကဲ... မိန်းကလေးတွေ ... ခုံပေါ်တက် မတ်တတ်ရပ်”
ကျောင်းသူအချို့ စူပုတ်ပုတ်ဖြစ်သွားသည်။ မျက်လုံးလေးတွေ လှန်ကြည့်နေကြသည်ကို ဘာအထာမှန်း ဆရာဦးလင်းမောင်ရိပ်မိသည်။ သို့သော်.... သူတို့ကို ဂရုစိုက်မနေအား။ လုပ်စရာရှိတာသာ ဆက်လုပ်ရသည်။ တရားခံမတွေ့ခင်အထိတော့ ရှာရလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးတွင် ဆရာဦးလင်းမောင် သက်ပြင်းသာချရတော့၏။ မိန်းကလေးများကိုတော့ အင်္ကျီချွတ်စမ်းဟဲ့၊ ထမီ ဖြန့်စမ်းဟဲ့ဟု ပြုလုပ်ခိုင်း၍မဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့သော်လည်း ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ် အဖြေထွက်ဖို့ နည်းလမ်းမျိုးစုံအသုံးပြုကာ ဖြေရှင်းနိုင်ကြောင်း ဆဋ္ဌမတန်း သင်္ချာဘာသာရပ်ကိုသင်ကြားနေသော ဆရာဦးလင်းမောင် တစ်ယောက် ကောင်းကောင်းကြီး နားလည်သဘောပေါက်ပါသည်။ အဓိက က အဖြေထွက်ဖို့သာ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဤပုစ္ဆာအဖြေထွက်ဖို့လည်း နည်းလမ်းတစ်ခု အသုံးပြုရဦးမည်။ ဆရာဦးလင်းမောင်သည် စာသင်ခန်းထဲမှ ထွက်၍ ကျောင်းစောင့်အိမ်သို့ထွက်ခဲ့သည်။ ကျောင်းစောင့်ထံမှ မီးခြစ်နှင့် ဖယောင်းတိုင် ယူလာခဲ့သည်။ ဘုရားစင်မှ ဖယောင်းတိုင်ကို ယူလာခဲ့သဖြင့် ဖယောင်းတိုင်က အနီရောင်ဖြစ်နေသည်။ ဆရာဦးလင်းမောင် သဘောကျသွားသည်။ ထို့နောက် ဆရာများနားနေခန်းထဲသို့ဝင်ပြီး ဖယောင်းတိုင်ကို ဆော့ပင် အနက်ဖြင့် ဆိုးလိုက်သည်။ အရောင်က ညိုပုပ်ပုပ်ဖြစ်သွားသည်။ ဆရာဦးလင်းမောင် ငါးခူပြုံးလေးတစ်ချက်ပြုံးလိုက်သည်။
ဖယောင်းတိုင်နှင့် မီးခြစ်ကို ကိုင်ကာ စာသင်ခန်းထဲဝင်လာသော ဆရာဦးလင်းမောင်ကို ကျောင်းသားကျောင်းသူများက မျက်လုံးလေးများပြူးကာ၊ ၀ိုင်းကာနှင့် ကြည့်နေကြသည်။
“ ကဲ..... အားလုံး နားထောင်ကြ၊ ဆရာက အားလုံးကို ရှာဖွေလို့ပြီးပြီ။ဒါပေမယ့် ပိုက်ဆံကို မတွေ့ဘူး။ ဒီတော့ ဆရာလည်း ဆေးဖယောင်းတိုင်ထွန်းပြီးရှာရလိမ့်မယ်။ အောင်ထွန်းရဲ့ ပိုက်ဆံကို ယူတဲ့သူဟာ ဒီဆေးဖယောင်းတိုင် ထွန်းတဲ့အချိန်ကစပြီး မငြိမ်းခင်အထိ ငွေကိုလာပေးလို့ရတယ်။ ဒီဆေးဖယောင်းတိုင် ငြိမ်းသွားတဲ့အထိ ငွေကိုလာမပေးဘူးဆိုရင် ......................”
ဆရာဦးလင်းမောင် စကားကို၇ပ်ပြီး ကလေးတွေကို အကဲခတ်လိုက်သည်။ မျက်လုံးလေးများ ၀ိုင်းကာ ဆရာဦးလင်းမောင်စကားကို နားစွင့်နေကြသည်။
“ ဒီဆေးဖယောင်းတိုင် ငြိမ်းတဲ့အထိ ငွေလာမပေးရင် အဲဒီယူတဲ့သူရဲ့ မိသားစုဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်။ ဥပမာ၊ အိမ်မီးလောင်တာမျိုး၊ အိမ်ထောင်ဦးစီး ဆုံးပါးသွားတာမျိုး၊ စီးပွားပျက်တာမျိုးပေါ့ကွာ၊ မဖြစ်ဘူးလို့တော့ မထင်လိုက်နဲ့နော်.။ ဒီဆေးဖယောင်းတိုင်က အင်မတန်စွမ်းတာ ... မယုံရင် စမ်းကြည့်ကြပေါ့”
ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် ဆရာဦးလင်းမောင်က ဖယောင်းတိုင်ကို မီးညှိနေသည်။ ထို့နောက် ဆရာစားပွဲပေါ်ထွန်းလိုက်သည်။ တိတ်ဆိတ်နေသော စာသင်ခန်းကို ကျောခိုင်းလျက် ဆရာနားနေခန်းဆီ ထွက်လာခဲ့သည်။ လမ်းလျှောက်လာရင်း သူကိုယ်တိုင် ရယ်ချင်လာသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ တစ်ခုခု ထူးခြားလာမည်ဟုတော့ ဆရာဦးလင်းမောင် ယုံကြည်နေမိသည်။
ဝေေ၀လှိုင်သည် ဆရာပြောလိုက်သည့် စကားကြောင့် အလွန်အမင်းထိတ်လန့်သွားသည်။ ချက်ချင်းဆိုသလိုပင် အိမ်မှ မိသားစုကို မြင်ယောင်လာသည်။ မိသားစုကို ဆိုက္ကားနင်းပြီး ရှာကျွေးနေသော အဖေ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ဈေးတွင် ရောင်းချရင်း အိမ်မှုကိစ္စများ ဆောင်ရွက်နေသည့်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါသည်အမေ၊ လူလားမမြောက်သေးသော မောင်လေးနှင့် ညီမလေးတို့၏ ပုံ၇ိပ်များက မျက်လုံးထဲတွင် ပြည့်နှက်လာသည်။
မိသားစုတစ်ခုလုံး ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုသော စကားကြောင့် ရှင်မီးအင်္ကျီထဲတွင် ၀ှက်ထားော ငွေငါးထောင်ကို ထုတ်မိမလိုဖြစ်သွားသည်။ စိတ်ကို အမြန်ထိန်းလိုက်နိုင်၍ တော်ပါသေးသည်။ အမှန်တော့ ဝေေ၀လှိုင် ဒီငွေတွေကို ယူချင်လွန်းလို့ယူမိတာမဟုတ်ပါ။ လိုချင်တပ်မက်သော ရမ္မက်လောဘကြောင့် မဟုတ်ပါ။ ဝေေ၀လှိုင်တို့ မိသားစုအခြေနေကြောင့်သာ ယူမိသွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မနေ့က အဖေ မိုးမိကာ ဖျားသဖြင့် ဒီနေ့ဆိုက္ကားမထွက်နိုင်။ မနက်စာကိုလည်း ဝေေ၀လှိုင်တို့ ထမင်းကြမ်းခဲကိုသာ လွေးခဲ့ရသည်။ နေ့လယ်စာ၊ ညနေစာများအတွက်အမေ မည်သို့စီစဉ်မည်မသိ။ ထို့ထက်ဆိုးသည်မှာ အဖေ့ကို ဆေးခန်းမပြရသေး။ အမေ့ဟင်းရွက်ရောင်းရငွေလေးက မဖြစ်စလောက်၊ အဖေ့ကို ဆေးခန်းမပြနိုင်လျှင် အခြေအနေက ပိုဆိုးလာနိုင်သည်။ ဒီအခက်အခဲများကြောင့် ဝေေ၀လှိုင် အောင်ထွန်း၏ ငွေငါးထောင်ကိုယူမိသွားပါသည်။ အစတုန်းကတော့ လွယ်အိတ်ထဲမှ ပြုတ်ကျနေသော ငွေများကို ကောက်ထည့်ပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကောက်ယူခဲ့မိသည်။ သို့သော်လည်း ငွေများလက်ထဲရောက်လာချိန်မှာတော့ ပြောင်းလဲသွားသော စိတ်၏ ကာလာအလျင်တို့နောက် ကာယကံမြောက် ပြုမူမိသွားသောအခါ မကောင်းမှုတစ်ခု အထမြောက်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။
ငွေများပျောက်၍ လွယ်အိတ်ထဲ ရှာဖွေလျှင် တွေ့သွားနိုင်သဖြင့် အိမ်သာသို့သွားကာ ရှင်မီးအင်္ကျီထဲ ၀ှက်ထားလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့်ဆရာတို့က ငွေရှာသော်လည်း မတွေ့။ မတွေ့သဖြင့်ဖယောင်းတိုင်ထွန်းကာ တရားခံကိုဖမ်းတော့မည် ။
ဤ ငွေများကို ပြန်မပေးလျှင် မိသားစု ဒုက္ခရောက်နိုင်သည်။ “ အိမ်ထောင်ဦးစီးကွယ်လွန်တာမျိုး”၊ ။ ဘုရား.....ဘုရား......။ ဇောချွေးများက တစ်ကိုယ်လုံး ပျံ့နှံ့လာသည်။ ဘာလုပ်ရမည်ကို အမြန်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ရမည်။ အချိန်ဆွဲနေ၍မဖြစ်။ ဆရာ့နောက် လိုက်ကာ ပြန်ပေးမည်လား။ မဖြစ်သေးပါ။ ဆရာက ဝေေ၀လှိုင့်အပေါ်အထင်အမြင်လွဲသွားမှာစိုးသည်။ ပြီး ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လုပ်ခဲ့သည်မှာမှန်သောလည်း ၀န်ခံဖို့ရာတော့ ဝေေ၀လှိုင်ရှက်သည်။
မကြာမီ မုန့်စားကျောင်းဆင်းတော့မည်။ သူများတွေ၊ မုန့်ဝယ်သွားသည့်အချိန်မှာ ပြန်ထားလိုက်လျှင်အဆင်ပြေပြီဟု တွေးမသော်လည်း မဖြစ်။ တချို့ မုန့်ဝယ်မသွားကြ၊ အခန်းထဲမှာပင် ထမင်းစားကြသည်။ စာဖတ်ကြသည်။
ဝေေ၀လှိုင် ခေါင်းက တရစပ်လှုပ်ရှားနေသည်။
ဟုတ်ပြီ။ ဒီနေ့ ဝေေ၀လှိုင်တုိ့ အသင်းနေ့။ မုန့်စားကျောင်းပြန်တက်ခါနီးတွင် အမှိုက်သွားပစ်ရမည်။ အမှိုက်တောင်းထဲ ပိုက်ဆံထည့်ထားလိုက်မည်။ အမှိုက်သွားပစ်တော့ သူများတွေ မြင်ကြလိမ့်မည်။ ပွဲပြတ်ပြီ။ အကြံနှင့် ဝေေ၀လှိုင် ရွှင်မြူးနေသည်။ ဆယ့်တစ်နာရီထိုးဖို့ ငါးမိနစ်သာလိုတော့သည်။ မိမိကိစ္စ အောင်မြင်တော့မည်။
နေ့စဉ်ကြားနေကျဖြစ်သော်ငြား ဒီတစ်ကြိမ်ကြားရသော ခေါင်းလောင်းသံသည် ဝေေ၀လှိုင့်အဖို့ ချိုမြိန်လွန်းလှသည်။
“ ဝေေ၀လှိုင်ရေ.... ငါမုန့်သွားစားလိုက်ဦးမယ်။ ကျောင်းတက်ခါနီးမှ အမှိုက်သွားပစ်မယ်နော်...”
“ အေးအေး... သွားသွား... ကြည်ပြာ။ နင်ပြန်လာမှ သွားပစ်မယ်”
အကွက်ကတော့ကျနေပြီ။ စာသင်ခန်း နောက်တံခါးမှဝင်ပြီး အမှိုက်တောင်းထဲသို့ ပိုက်ဆံကို မသိမသာ ပစ်ထည့်လိုက်သည်။ မည်သူမှ မရိပ်မိ။ ပြီး ကိုယ့်နေရာကိုယ် ဟန်မပျက် ၀င်ထိုင်နေလိုက်သည်။ ဆ၇ာစားပွဲပေါ်မှ မီးညွန့်တလူလူနှင့် ဖယောင်းတိုင်ကြီးကို ခပ်ပြုံးပြုံးလေးကြည့်ရင်း ကြည်ပြာ ပြန်လာမည့်အချိန်ကို စောင့်နေမိသည်။
“ ဝေေ၀လှိုင် .... လာ အမှိုက်ပစ်ရအောင်”
“ အေး..လာပြီ၊ လာပြီ ”
ကြည်ပြာက အမှိုက်တောင်းရှေ့၇ပ်စောင့်နေသည်။ မမြင်သေးဘူးလားမသိ။ ဝေေ၀လှိုင်ပင်မြင်နေရသည်။ ပြောလိုက်လျှင် ကောင်းမလား စဥ်းစားသော်လည်း ကိုယ်ကစပြီး မြင်တာမျိုး မဖြစ်ချင်။ သံသယ၀င်သွားလျှင် ဒုက္ခဖြစ်ဦးမည်။
“ နေဦး... ဘေးမှာ အမှိုက်တွေ ကျနေတယ်။ ငါကောက်လိုက်ဦးမယ်”
ဝေေ၀လှိုင်က အမှိုက်ကောက်ရင်း ငွေငါးထောင်ကို ကြည်ပြာမြင်ပါစေဟုသာ တတွတ်တွတ် ဆုတောင်းနေမိသည်။
“ ဟယ်... ပိုက်ဆံတွေတော့် .... အောင်ထွန်းပိုက်ဆံတွေထင်တယ်”
“ အေတော်..... ဟုတ်ပါ့။ ဟေး.... ဒီမှာဟေ့ ...အောင်ထွန်းပိုက်ဆံတွေ ပြန်တွေ့ပြီ”
ဝေေ၀လှိုင်က အတန်းသားများကို လှည့်ပြောလိုက်သည်။
“ ဟယ်...ဟုတ်လား.... ”
“ဟေး... ဟုတ်တယ်ဟေ့။ အောင်ထွန်းရေ......”
“ဆရာ့ကို သွားပြောချေ။ ဆရာ့သွားပြော”
“ဟုတ်တယ်ဟေ့....၊ ဖယောင်းတိုင်မီး ငြှိမ်းခိုင်း၊ ငြှိမ်းခိုင်း”
ဝေေ၀လှိုင့်ရင်ထဲက အလုံးကြီး ကျသွားသည်။ တော်တော်ကြီး ပျော်သွားသည်။ မကောင်းမှုတစ်ခုကို အချိန်မီ ချေဖျက်နိုင်ခဲ့ပြီ မဟုတ်လား။ မကြာမီ ဆရာရောက်လာလေသည်။ အခြေအနေ အကျိုးအကြောင်း ဆရာ့ကို ရှင်းပြကြသည်။. အောင်ထွန်းခမျာမှာလည်း ၀မ်းသာလွန်း၍ထင်သည်။ မျက်ရည်များပင် စို့နေ၏။
ဝေေ၀လှိုင်ကတော့ အောင်ထွန်းနှင့် ဆရာ့ကို တောင်းပန်သည့် မျက်ဝန်းမျိုးဖြင့် ကြည့်နေမိသည်။ ဝေေ၀လှိုင့်မျက်လုံးများကို မြင်သွားလျှင်လည်း နားလည်သွားပါစေဟုသာ ဆုတောင်းနေမိပါတော့သည်။
ဖူးငုံဆယ်ကျော်သက်မဂ်ဂဇင်း( teen magazine ) ၊ အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၁၂။
ဒီဝတ္ထုလေးဟာ တကယ့် အဖြစ်အပျက်ကို နောက်ခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ခြောက်တန်းကျောင်းသားဘ၀က အခန်းထဲမှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရဖူးတဲ့ ကိစ္စလေးကို နောက်ခံထားပြီး အဆာပလာ ကြံသကာတွေ သွတ်သွင်းလိုက်တာပါ။ ၀တ္ထုထဲမှာ ပိုက်ဆံကို ကောင်မလေးယူမှန်း ဘယ်သူမှ မသိကြပေမယ့် အပြင်က တကယ့်အဖြစ်အပျက်မှာတော့ ဘယ်သူယူတယ်ဆိုတာ အတန်းသားတွေက ရိပ်မိခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလို ဇာတ်သိမ်းမျိုးကိုမနှစ်ခြိုက်မိတာကြောင့် ပြုပြင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အားပေးသူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by ဝေမိုးနိုင်(မုံရွာ) at 9:45 PM
မိုးညချမ်း August 16, 2012 at 3:08 AM
ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာ အစ်ကိုရေ ... အမှားကိုဇွတ်မှိတ်ပြီး ဆက်မှားလိုက်တာထက် အမှန်ကို အချိန်မှီပြင်လိုက်တာက အကောင်းဆုံးပေါ့ အစ်ကိုရေ ... :)
ဝေေ၀လှိုင် ဘယ်လို ပြန်ပေးမလဲလို့ ဖတ်နေရင်း စဉ်းစားမိတယ်။ စစချင်း ဆရာက အတန်းရှေ့မှာ စက္ကုဗူး သို့ တစ်ခုခုထားပီး ကျောင်းသားအားလုံး တစ်ယောက်ချင်းစီ ဗူးထဲကို ယူယူမယူယူ တစ်ခုခု လာထည့်ခိုင်း၊ ပိုက်ဆံယူထားတဲ့သူလဲ အများသူငှာလို လာပြီး ယူထားတဲ့ ပိုက်ဆံကိုလာထည့်လို့ ရအောင် လုပ်ခိုင်းမယ်လို့ တွေးမိတာ။ ရေးထားတာလေး မဆိုးပါး)
မြတ်ပန်းနွယ် August 23, 2012 at 9:00 PM
ခေတ်ဆိုးကြောင့် ဖြူစင်တဲ့ ကလေးတို့ရဲ့စိတ် ညစ်နွမ်းနေတာလေးကို ထင်ဟပ်ပြထားတယ်။
အမှားကိုမြင် အမှန်ကိုပြင်လိုက်နိုင်ပေမယ့် နောက်တစ်ကြိမ် နောက်တစ်ခါမှာ သူဘယ်တော့မှ ထပ်မလုပ်မိတော့ဘူးလား။ တွေးနေမိပါတယ်။
တိမ်မိုးဝေ September 4, 2012 at 5:02 AM
တော်တော်လေးကောင်းတယ် သူငယ်ချင်း၊ ကြိုက်တယ်ကွာ....
ဖတ်ရင်းနဲ့ ရင်ထဲ တဒိန်းဒိန်းနဲ့ ဘယ်လိုဖြစ်မလဲလို့ ....